FiNN FLARE na ngwa ngwa mgbazinye ego si AmmoPay maka ndị na-azụ ahịa nke ọma!
Ụlọ ahịa na-echekwa ahịa FINN FLARE na-akpọ ọkwa nke ọrụ microcredit na ụlọ ọrụ AmmoPay.
Ugbua taa, ndi obia nile na-abanye uzo FiNN FLARE nwere ike iji ohere nke inweta ugbua n'egbuputa na oge enweghi ohere nke iri ato ato. Usoro mbinye ego ga - ewe ihe karịrị nkeji atọ, gụnyere ntinye aha na nkwado nke mbinye ego ahụ. A malitere oru ngo na iwebata usoro ntinye aka ngwa ngwa na netwọk nke ụlọ ahịa "FiNN FLARE" na February 2016 ma dị ugbu a na ụlọ ahịa niile.
Iji mepee akara akwụmụgwọ ya ezuru iji tinye data nkeonwe na ego achọrọ na ụdị akpaaka na saịtị ammopay.ru site na ngwaọrụ ọ bụla. A na-eme mkpebi iji nye ego a na-akpaghị aka: ụdị ihe nlereanya ọhụrụ na-enye ohere ịnweta nkwado ego n'ime sekọnd ole na ole. Ozugbo a kwadoro, a na-ezipụ koodu ịkwụ ụgwọ pụrụ iche ozugbo na ekwentị mkpanaaka nke onye ahịa ahụ, nke a ga-anabata maka ịkwụ ụgwọ na onye nkwụnye ego karịa ego ma ọ bụ kaadị akụ. Ọnụ ego nke mgbazinye ego maka ịzụta nyere n'ime usoro nke ọrụ a nwere ike ịbụ site na 1.5 ruo 30 puku rubles. Ịkwụ ụgwọ ịgbazinye ego ga-ekwe omume n'otu oge ma ọ bụ mbak site na kaadị akụ, site na nkwụ ụgwọ ma ọ bụ obere akpa ego Qiwi. Oge na-enweghị mmasị maka iji ego ịkwụ ụgwọ bụ ụbọchị 28, mgbe ahụ, ọnụego ahụ dị 0,5% kwa ụbọchị, oge kachasị ụgwọ ego bụ izu iri na abụọ site na ụbọchị ịzụta.
Ọrụ ga-adọrọ mmasị na mbụ, ndị nwere ọgụgụ isi na ndị nwere ọgụgụ isi na ịzụta. Nkwụnye ụgwọ ozugbo site na AmmoPay ga-enye gị ohere ịgbakọ mmefu ego ma chịkwaa mmefu nke aka gị, n'egbughị oge ịzụ ihe ọhụrụ FiNN FLARE. Ná mmalite nke oge, ị nwere ike imelite uwe elu, ma kwụọ ụgwọ nke ọma, n'ime ọnwa atọ. Ma ọ bụ n'oge ahia, ọrụ ahụ ga-enye gị ohere ịnweta ihe niile ịchọrọ na uru, ebe ogo dị.
Maka ozi ndị ọzọ, biko kpọtụrụ:
Uwe eji akwa capsule maka mgbụsị akwụkwọ 2013
Jean na Paraskeva - nchịkọta ọhụrụ 2016
Ịgba agba 2017 - ụdị agba a ga-eji eme ihe n'afọ ọhụrụ ahụ?
Uwe - ejiji 2014
Uwe ejiji - echiche maka 2016 oge
Lemonade si tarawa n'ụlọ
Ịwa ahụ nke cervix na Surgitron
Chiiz pancakes na elu
Kedu otu esi eche violets?
Ụsọ nri nke iri na asaa nke ga-eju gị anya n'ezie
Unobtrusive okooko osisi okooko osisi-perennials maka ubi
James McAvoy na Anne-Marie Duff
Onyinye mbụ nye onye nkụzi maka oku ikpeazụ
Pachyxysmal tachycardia - mgbaàmà
Masks maka ntutu si ụrọ
Mkpọchi ígwè maka brik
Mgbu m gburu - gịnị ka m kwesịrị ime?
Na-achọ ịbanye na ya
A na-enwe mmasị na netwọk site na nkedo nke Kayi Gerber na Cindy Crawford